about_us ｜ Aung Thiri Diamonds
aungthiridiamonds@gmail.com 09-2016654 ၊ 09-401320943
ပြန်ရောင်း, ပြန်လဲ အရှုံးမရှိ တာ အောင်သီရိပါ
အောင်သီရိစိန်တိုက် အား (၁၄.၂.၂၀၁၅) မှာ စတင်တည်ထောင် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ ပါသည်။ လုပ်ငန်း စတင်ချိန် ကအခက်အခဲများစွာရှိခဲ့ပေမယ့် ဇွဲလုံးလ အပြည့်ဖြင့် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့သောကြောင့် ယနေ့အချိန် မှာတော့ ရန်ကုန်ရုံးချုပ် Showroom မန္တလေး Diamond Showroom ကို ဖွင့် လှစ်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
ဒီနေ့အချိန်ထိ အောင်သီရိ ရပ်တည်နေနိုင် တာ စိန်ချစ်သူမိတ်ဟောင်း မိတ်သစ်များ ရဲ့အားပေးမှု ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှေ့ဆက်ပြီး အောင်သီရိစိန်တိုက်အနေဖြင့် စိန်ကောင်း ရွှေကောင်းဖို့ အဓိက အမြတ်များစွာ မတင်ပဲ စေတနာ အဓိက ထားပြီး လုပ်ဆောင် သွားမည် ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါသည်။
‌ အောင်သီရိစိန်တိုက်မှ Belgium တိုက်ရိုက် တွင်းထွက် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော ၊ အာမခံချက် ပြည့်ဝသော စိန်ထည် နှင့် စိန်အကြွေများကို လက်လီ လက်ကား ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပြီး ချစ်မိတ်ဆွေ များစိတ်တိုင်းကျ Order ထည်များကိုလည်း လက်ရာသေသပ်စွာဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါ သည်။
Re-sale, Re-exchange, no loss, called Aung Thiri Diamonds
Aung Thiri Diamonds was founded in 14.2.2015. Beginning of business, there were many difficulties, but we could open Main Showroom in Yangon and Mandalay Showroom because of the hard work with full zeal.
Even today, we are standing in the market due to the encouragement of new and royalty customers. Aung Thiri Diamonds decide for customers to focus on the quality of products without emphasizing for profit.
Aung Thiri Diamonds are directly Belgium mineral quality, we are creating with full Guarantee for perfect diamonds and can get for lovely customers by wholesale and retail. Moreover, we are servicing and creating the customized design as the desire of the customers.
ဒီဇိုင္းဆန္းပီး အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္ -အမွတ္​ ၆၇၇ ၁၉*၂၀ၾကား မဟာ​ဗႏၶဴလလမ္​းက္​ႏွာခ်င္​းဆိုင္​
ဖုန္း - 09-5043649 ၊ 09-401320940
All rights reserved | Site by MML Web Development